Kungani uphupha ngegolide. Ukuhumusha iphupho thola igolide.
Kungani uphupha ngegolide? Ukuchazwa okucacile kwephupho lapho igolide lenziwe khona.
Ngalesi sici esiyigugu, okhokho bethu bahlanganisa izinkolelo eziningi futhi bayamukela. Isibonelo, kwakucatshangwa ukuthi ukulahlekelwa kwezinto zokugqoka zegolide kusho ukuthethelelwa kwezono. Thola igolide - thatha izinkinga zalahlekile. Ukuchazwa kwamaphupho ngegolide nakho kuningi kakhulu futhi iningi lifanekisela into enhle, kodwa yini ngempela, asiqonde.
Uma ephusheni lakhe intombazane yaba ngumnikazi wegolide, lokhu kuveza impumelelo yayo kuzo zonke izigaba zokuphila. Ezinyangeni eziyisithupha ezilandelayo, akukho ubunzima bezezimali ngeke kukuthinte.
Lahle igolide ephusheni - isixwayiso ngengozi. Mhlawumbe, othile ucasukile kakhulu, ebona ukunqoba kwakho, ngobuqotho ufuna ukuthi unenkinga. Lo muntu uzama ukuletha ukungezwani empilweni yakho ngokusebenzisa inhlebo engcolile. Uma uphupha iphupho elinjalo, sincoma ukuya esontweni bese ubeka ikhandlela empilweni yesitha sakho.
Ukuze unikeze umuntu ngegolide lephupho kusho ukuthi kunomuntu osemvelo wakho owenza ngokuhlakanipha ukusebenzisana nawe futhi usebenzise umusa wakho. Uma ucabanga ngakho, kunengqondo ukunikeza lo mbuzo isikhumbuzo esincane esizomphazamisa ekuhloseni ukuzibophezela futhi uvale isiteshi samandla esiholela kuwe.
Zibukeka kanjani njengezingubo zegolide?
Izindwangu ezenziwe ngegolide ephusheni, iningi labahumushi bephupho ngokufanayo - liwuphawu lokuqaphela amakhono akho nobuhle bakho. Abesifazane abaningi, ngaphandle kokufihla lokhu, bazobonga idatha yakho yangaphandle, namadoda - azoyibheka njengomvuzo wokugcwalisa i-whim yakho. Esikhathini senkampani yebhizinisi - lokhu kuyisibonakaliso sokuthi maduzane, kukhona amathuba okukhuthazwa esikhwameni somsebenzi.
Ngaphezu kwalokho, uma uphupha ngochungechunge, kwakungeke kubalule ukuthi ngabe usekho entanyeni noma ezandleni zakho, bese kuthi ezinyangeni ezintathu uzoba nenhlanhla kuyo yonke imizamo yakho. Ukuze unike umuntu lo mhlobiso kusho umona ngesabelo sakho empumelelweni yomuntu.
Ngokuvamile, akunandaba ukuthi yimiphi umkhiqizo ophuphayo. Kungaba namacici, namasongo, ama-brooches njalonjalo. Incazelo evamile yale maphupho ihlale iyancipha ibe mnandi we-fortune nokuphakama kwesimo. Indandatho yomshado ephusheni - kusho ukuthi umshado nomlingani wakho wamanje uthembisa ukude, ujabule futhi uqine.
Ukuphuka noma ukubhubhisa ukuhlobisa kumthembise umphuphi ukulahlekelwa okuthile okubonakalayo. Kusukela ku-trinket encane, ekupheleni nge-real estate.
Izinto ezenziwe ngegolide ezingekho ezihlotsheni zokuhlobisa, isibonelo, iziqu zegolide noma imigoqo yegolide - uphawu lokuqedwa kokudala. Uzoveza ngemibono emisha, amandla angakaze abe khona ngaphambili azovela, futhi acabange kalula izinhlelo ezihleliwe zibe yiqiniso.
Amaphupho, njengezibonakaliso zabantu lapho uthola khona isiqeshana se-alloy eyigugu, uthwala amandla angenalo kumphuphi, ngoba zonke izifo nezinkinga ezivela kumnikazi omdala zingathola inkosi entsha. Uma ephusheni uye waba umnikazi othokozelayo wegolide ore ovela enhlabathini, cishe, ngeke uzame ukufinyelela eziphakeme zezimali esikhathini esizayo esiseduze.
Isakhiwo ozama ngaso ukuthola igolide, kodwa yonke imizamo ayifuni, ihlobene ngokuqondile nezwe lakho langempela. Awunelisekile ngokuphila kwamanje, okufunayo akuhambisani nomuntu wangempela futhi usesesimweni sokufuna imali njalo. Kodwa nokho lesi simo sephupho akusona isizathu sokuyeka, uzophumelela.
Ekwahlulela ngalezi zinguquko, umuntu angathola ukufana okufanayo nezinkolelo-ze. Futhi zonke izibonakaliso, njengoba sazi, zihlangenwe nakho kwezizukulwane ezingaphezu kwesisodwa sabantu. Okhokho bethu bayazi ukuthi lokhu noma lokho into noma isithombe kungabavimbela, ngakho-ke kwakungenangqondo ukungakholelwa ukuhlakanipha kwabantu.
Iyini inhlanzi ye-aquarium ebonakalayo?
Izingubo ziphupha ngani? Ukuchazwa Kwamaphupho
Yini i-acne ibukeka?
Solution for inhalation: indlela yokufaka isicelo
Ukudla okungamanga ezinganeni: izimbangela, ukunakekelwa okuphuthumayo
Ukupheka kwekosikazi enenkuthalo: silungiselela izinhlanzi ebusika
I-cuisine ewusizo kakhulu emhlabeni
U-Olga Orlova uhlongozwe ukuthumela indodana eneminyaka engu-16 "Dom-2"
Izinzuzo nokuqeda ukwelashwa ngokweqile ngokuphazamiseka ngokocansi
Izinwele ezimfushane zezinsikazi
Indlela yokunquma uhlobo lomfazi nge-lipstick
Indlela yokugqoka stylishly